Ordinatera - Ny Word Foundation • Boky, Audio, Gazety, ary bebe kokoa
Boky, Etera ary Audio
Fisainana sy faniriana, Lehilahy sy Vehivavy ary Ankizy, Ny demokrasia dia fitondram-panjakana ary Akora ary famantarana dia hita amin'ny endrika elektronika ihany koa ao amin'ny anay Pejy pejy.
Thinking and Destiny Audiobook (USB Flash Drive, endrika MP3)
Safidio ny firenenaUSAKanadaUKPays-BasGermanyFrantsaEspainaItaliaJapanaAostralia
Kaomandy avy any Amazon
Ny mpikambana rehetra ao amin'ny The Word Foundation, na inona na inona ambaratonga fanohanana azonao, dia handray ny gazetiboky, ny The Word, ary fihenam-bidy 40% amin'ny boky Percival. Raha te-ho mpikambana ianao ary haka ny fihenam-bidy amin'ny baikonao, na raha efa mpikambana ary te hampihatra ny fihenam-bidy, azafady Mifandraisa aminay mametraka ny baikonao amin'ny alàlan'ny fisavana, telefaona na fax.
Nandritra ny 70 taona mahery, The Word Foundation dia nanolo-tena hanao ny sanganasan'i Harold W. Percival ho an'izay rehetra mitady ny Fahamarinana. Ny fanomezana tena ankasitrahanao dia hanampy amin’ny fanitarana ny fahafahantsika ary hanohana koa ireo lafin-javatra lehibe maro amin’ny asantsika, toy ny fitazonana ireo boky ho pirinty, fanontam-pirinty elektronika, dokam-barotra, ary fanomezana boky maimaim-poana ho an’ireo voafonja, trano famakiam-boky, ary ireo olona tsy manam-bola.
Tohano amin'ny fomba hafa
Please Mifandraisa aminay momba ny:
Ny fanomezana fanomezana vola isan-taona
Ny fanomezana fanomezana tahiry na antoka
Ny fandaminana ny fanampiana isam-bolana
Fahatsiarovana ny Teny fototra ao amin'ny sitraponao